Madaxweyne Musaveni oo qirtay in askartiisa ay dileen shacab Soomaali ah (Aqriso) - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Musaveni oo qirtay in askartiisa ay dileen shacab Soomaali ah (Aqriso)
Madaxweyne Musaveni oo qirtay in askartiisa ay dileen shacab Soomaali ah (Aqriso)
Kampala (Caasimada Online) – Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Musaveni ayaa markii u horeysay qirtay in askartooda howl-galka AMISOM u jooga Soomaaliya ay dhawaan dad rayid ah ku dileen gudaha Shabeellaha Hoose.
Musavani ayaa sheegay in ciidamadu ay dilka geysteen xili ay careysnaayeen, isagoona shaaciyey in la xiray askartii dilka geysatay, islamarkaana dacwad lagu soo oogi doono, sida uu sheegay.
“Dhawaan waxaa na soo gaaray kiis la xirriira dil Soomaaliya ka dhacay, koox ka mid ah askarteena ayaa dad laayay, dhamaan xubnihii falkaas ka dambeeyay waa la xiray dacwad ayaana lagu soo oogay,” ayuu yiri madaxweynaha Uganda.
Sidoo kale waxa uu sheegay in magdhow ay siin doonaan ehelada dadkii ay ciidamada dalkiisu ku dileen Shabeellaha Hoose.
Toddobaad ka hor ayey aheyd markii ay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalka Uganda ay dad shacab ahaa ku rasaaseeyeen qeybo ka mid ah gobolkaas, kadib markii qarax miino lagula eegtay agagaarka Shalanbood.
Waxay xiligaas galeen beer ay ku sugnaayeen 4 shaqaale ah iyo ninkii iska lahaa, sidoo kalena ay waxay wadada ka qabteen labo darawal, kuwaasi oo hal goob isugu geeyeen, ayna rasaas ku laayeen, sida uu warbaahinta u sheegay Guddoomiyaha deegaanka Shalanbood.
Inta badan ciidamada AMISOM ayaa dilal iyo tacadiyo kale u geysta dadka shacabka ah, xilliyada ay weerarada gaadmada ah kala kulmaan dagaal-yahanada Al-Shabaab.